Kukohwa kwakanaka kwako mbanje mbesa | MyWeedSeeds.com
Maitiro ekuwana zvakanyanya kubva pambesa yako
Kuchengeta nguva kwakakosha sei
Resin gland: iwo ruvara, potency uye masitayiti epamusoro
mirayiridzo yekudyara mbanje /
Kukohwa kwakanaka kwako mbanje kudyara
Kudzidza nzira yekukohwa mbanje zvirinani zvakakosha pakurima chirimwa chako. Izvo zvinogona kuve zvakaenzana zvakakosha sekukura kwacho pachako. Murimi mumwe nemumwe ndiye anoona kunhuwirira nekunhuhwirira kwezvirimwa, pamwe nekuomesa nekurapa goho chairo rekuvandudza muchikamu chimwe nechimwe. Ukarapa nekuchengetera mbanje yako nemazvo, unozopedzisira wave nechigadzirwa chiri nani. Chigadzirwa chese mbanje chinogadzikana nezera, rakafanana newaini. Kana usati warapa zvirimwa zvako parizvino, mirira kusvikira wawana mukana wekuravira zvitsva. Kuti ikubatsire kuwana nzira chaiyo yeyako gadheni uye saizi yezvirimwa, tiri kuzopa matatu maonero ekuti ungakohwe sei zvichienderana nekukura kwemaitiro uye saizi yegadheni. Tichatsanangurawo rumwe ruzivo nezve kurapa, nguva, simba uye mazano edu panzira yekuchengeta yako mbanje chirimwa stash
Zvino zvawakaita kusvika kumagumo ehurongwa, iwe uri kutarisana nenguva yekukohwa. Panzvimbo pekungoshamisika kuti inguvai kana nguva yekukohwa, isu tiri kuyedza kupa njere yekuve anobudirira murimi wekudyara mbanje nekucheka. Isu tiri kuronga kukuratidzira izvo "zviite" uye izvo "zvisingaiti" zvekubudirira kukohwa uye kurapwa. Kutanga tichatarisa pakukohwa. Nguva pano yakakosha. Iwe unoda kuve nechokwadi chekukohwa kana yako mbanje mbesa dzanyatsoibva. Takasangana nekuvhurwa kwemazuva mashanu kana mashanu apo mbesa dzako dzinenge dzaibva zvakakwana pasina kuwanda. Kuti uve nechokwadi chekuve uripo, tinokurudzira kushandisa jeweler's magnifying lens, inonzi loupe. Izvo zvirinani kukudza, zvirinani iwe uchakwanisa kuona misoro yetrichome pamagumo eresin glands, asi usaende pazasi pe5x.
Ruvara rwemagonyeti rwunozosiyana zvichienderana nekukora kwaita maronda eTHC. Ivo vachatanga kubuda pachena, kushanduka kuita mukaka uye kumisa amber. Kune akasarudzika mashoma, zvisinei, senge dzimwe nguva marudzi ekunze kana "Purple Power" zvirimwa. Izvo zvipembenene zveizvi zvichave zvakasviba, zvinenge zvichioneka zvepepuru muvara. Iwe unozoona kuti aya matanho matatu anoshanda kune angangoita ese akasiyana emuti wembanje. Chikamu chekutanga chiri kukohwa kana maronda akajeka. Izvi zvinopa iyo "kumusoro" yepamusoro iyo ihuropi, isina zvakawanda zvinoitika kumuviri. Izvi zvinowanzo kutariswa kare kare nekuti THC haina kukura zvakakwana kuti ipfuure iyo psychoactive zvimiro pamwe chete neanosvuta. Tinokurudzira kuti umirire kusvikira makumi mashanu muzana ezvi trichomes zvashanduka kuita mukaka. Chikamu chechipiri chikamu chinotapira kana mukaka. Mbeu yako yasvika pakukwanisa kwayo, nemajini, izvozvi. Iwo ma trichomes ayo achiri mukaka achapa musanganiswa wehuropi uye nemuviri wakakwira panguva ino. Chikamu chechitatu ndiyo amber nhanho. Izvi zvinopa iro rakanyanya kuwanda dombo riine sedative mhedzisiro. Kana ichi chiri icho chinangwa chaunoda, tinokurudzira kushandisa musanganiswa wesativa / indica kana kushandisa chiratidzo chinonyanya kuratidza mbanje. Iyo yakakwira kubva kune sativa chirimwa inoderedzwa kana gland ikava amber mune dzakawanda kesi. Mufananidzo uyu unoratidzira chirimwa chembanje chakaibva uko pamusoro pe50% yemaronda ari mukaka aine mashoma akasara akajeka uye vashoma vanoshandura amber. Mazuva maviri mushure mekutorwa kwemufananidzo uyu, chirimwa chakakohwa.